China Super-low Head Room လျှပ်စစ်ချည်နှောင်စက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | Chenli
▲ ၎င်းသည်စက်ကိုယ်ထည်နှင့်ရောင်ခြည်လမ်းကြောင်းများအကြားအကွာအဝေးကိုတိုစေသည့်ထူးခြားသော OptimaI ဖွဲ့စည်းပုံ၏ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ယာယီဆောက်လုပ်ထားသောစက်ရုံအဆောက်အအုံများသို့မဟုတ်အဆောက်အအုံအတွင်းရှိ effectiss hoispaces တိုးချဲ့နေရာများတွင်အသုံးပြုရန်အထူးသဖြင့်နတ်သမီးပုံပြင်အနိမ့်အဆောက်အ ဦး များအတွင်းရှိစစ်ဆင်ရေးများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ လိုအပ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံရှိစျေးကွက်တော်တော်များများတွင် Chenli ကုန်ပစ္စည်းများသည်ကုန်သည်များ၏စျေးဝယ်များ၏ရှေ့တန်းရှိကုန်ပစ္စည်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အကောင်းဆုံးရောင်းသည် (Changjiang မြစ်၏မြောက်ဘက်၊ ရုတ်ခြည်းနှင့်ဖိအားများသည်အခြားတူညီသောထုတ်ကုန်များထက်များစွာပိုရောင်းသည်); နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများသည်ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီးလူသိများသောသတ်မှတ်ချက်များကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို ပို၍ နှစ်သက်ကြသည်။ အထူးသဖြင့်ဥရောပနိုင်ငံများ (ပြင်သစ်၊ အီတလီ၊ အင်္ဂလန်၊ စပိန်စသည်တို့) တွင်ကုန်ပစ္စည်း၏ခွင့်ပြုချက်သည်အလွန်မြင့်မားသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ စက်ရုံ၏နောက်ထပ်တိုးချဲ့မှု၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအနာဂတ်ကိုရရှိမည်ဟူသောခိုင်မာသည့်အထောက်အထားဖြစ်သည်။
▲ လျှပ်စစ်ကွင်းဆက်သည်အလေးချိန်ရှိသောအရာများ၊ ဝန်တင်ခြင်း၊ ချခြင်း၊ ပစ္စည်းများကိုထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်၊ အဆင်ပြေသောလည်ပတ်မှု၊ အဆင့်မြင့်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိပ်တန်းလက်စွဲကွင်းဆက် block.lever block၊ လျှပ်စစ်ကွင်းကြိုးနှင့်အခြားဓာတ်လှေကားပစ္စည်းများကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်အထူးပြုလုပ်ထားသည်။
▲ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဒီဇိုင်း၊ အဆင့်မြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဘောင်၊ အသံသေးငယ်မှု၊ ပြီးပြည့်စုံသောအသွင်အပြင်၊ ကြီးမားသောတည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်တာရှည်ခံသောစရိုက်များရှိသည်။ ဆူညံသံ၊
▲ စက်ရုံ၊ ဂိုဒေါင်၊ အလုပ်ရုံ၊ ဆိပ်ကမ်း၊ ဆိပ်ကမ်းများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။
▲ Shell： ပေါ့ပါးသောအလူမီနီယမ်အလွိုင်းကိုအသုံးပြုရမည်။ ၎င်းသည်ပြင်းထန်သော်လည်းအပူလွန်ကဲမှုနှုန်းနှင့်တင်းကျပ်သောဒီဇိုင်းနှင့်အတူကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်သင့်တော်သည်။
▲ inverse phase sequence protecting device device fi lt ဆိုသည်မှာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြည့်သွင်းရာတွင်အမှားအယွင်းများဖြစ်ပွားပါက circuit ကိုအလုပ်မလုပ်စေရန်အထူးတပ်ဆင်ထားသည့်လျှပ်စစ်တပ်ဆင်မှုဖြစ်သည်။
▲ Limit Switch the ကိုယ်ထည်အလေးချိန်ကိုမြှင့ ်၍ ပိတ်ထားသည့်နေရာတွင်မော်တာကိုအလိုအလျောက်ရပ်တန့်စေပြီးလုံခြုံမှုအတွက်ချည်နှောင်ခြင်းကို ကျော်လွန်၍ တားမြစ်ရန်သတ်မှတ်ထားသောခလုတ်ကိုတပ်ဆင်သည်။
▲ 24V / 36V ကိရိယာ - ခလုတ်ထဲ၌ယိုစိမ့်မှုဖြစ်ပွားပါကအရေးပေါ်အခြေအနေကိုဖြစ်ပေါ်ရန်တားမြစ်ရန်အသုံးပြုသည်။
▲ ဘေးထွက်သံလိုက်ဘရိတ်စက် power ဤစက်သည်ပါဝါစွန့်ပစ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ချက်ချင်းဘရိတ်ကိုနားလည်သည်။
▲ ချည်ထည်အိတ် ight ဒါဟာ Iight ဖြစ်လိမ့်မည်， ချောမောခြင်းနှင့်အကြမ်းခံ။
▲ ချည်ထည်： ကွင်းဆက်အနေဖြင့်သွင်းထားသော FEC80 အလွန်အပူ - treatabIe auminium alloy ကွင်းဆက်ကိုအသုံးပြုသည်။
ရှေ့သို့ 0.5t-10t အမျိုးအစားလည်ပတ်သောလျှပ်စစ်ပုံဖမ်းတွန်းလှည်း
နောက်တစ်ခု: တစ်ခုတည်းအမြန်နှုန်းအမျိုးအစား 35t- စာရေးကိရိယာ
လျှပ်စစ်ချည်နှောင်မှုကို3တန်
Motor Cholley နှင့်လျှပ်စစ်ကြိုးချည်နှောင်ခြင်း
လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးကြိုးတူးစင်5တန်
Single Speed ​​အမျိုးအစား 10t -tolley လည်ပတ်မှု ...
Single Speed ​​type15t -Electric trolley အပြေး ...
လူပျိုအမြန်နှုန်းအမျိုးအစား 10t -hook အမျိုးအစား
တစ်ခုတည်းသောအမြန်နှုန်းအမျိုးအစား 300Kg - လက်ဖြင့်ပုံဖမ်းတွန်းလှည်း ...
Single Speed ​​အမျိုးအစား 7.5t -Electric trolley runnin ...
Single Speed ​​အမျိုးအစား 0.5t-5t -Manual trolley runni ...